Shirarka iyo daqiiqo | Holmbygden.se
Halkan waxaad ka heli doontaa in hab maamuuska iyo macluumaad ku saabsan shirarka.
Xeerka waxaa lagu badbaadiyey in “pdf-format” ama “eray-format” oo u furan daaqad cusub marka aad riix. Haddii aad rabto in aad kala soo bixi dokumenti, midig ku dhufo oo dooro “Save Target Sida…” (ama wax u dhigma in aad browser).
Si aad u akhrido waraaqaha PDF aad u baahan tahay
oo ka mid ah Acrobat Reader (halkan kala soo bixi).
HBU F / shirarka xarunta T
120313 Minutes of Kulanka Sanadlaha (ma beddelo).doc
Kulanka Idea Holm for Holm nool
Österström, 16/1 2013 VISA.Close.
tababarka badbaadada Thomas Åslin qabtay ka hor Christmas seefqaad ah dad badan oo waa faa'iido weyn u tahay ammaanka Holm. waxay noqon kartaa tababar sanadkan.
marawaxadaha dabaysha lacag loogu tala galay Baadiyaha Holm socdo dadka deggan. Ha sii joogteeyaan xidhiidhka iyaga iyo raacsan, iyo kuwo kale. wadada si Nötåsen shoveled. Cabirka ay daqal burburiyay bishii February iyo dhismaha noqon doonaa. Urur kasta oo ganacsi la sugi karin, waana arki doonaa waxa foomka ururka fiican ku haboon si ay u helaan kaalmada miyiga. tabarruca uu noqon doonaa wax kasta oo ka faa'iidaysan degmada oo dhan.
Warbixin ku saabsan xaaladda Senior Home iyo Macallinka ee Housing.
inta ay kukacayaan KELIYA 30 SEK si aad u hesho bac of raashinka hemkördfrån ICA Liden via servicelinjen. badan oo ku saabsan sida loo sameeyo baro.
Tommie la hubiyey Björn xadhiga – Mittlandia inay yimaadaan oo ay ka hadlaan mashaariicda Hogaamiyaha (dalka Bygdsiljum bidrag). Isagu ma uu maanta ka qayb laga yaabaa. Isku dayga mar kale.
Macken waxaa si joogto ah la xiray. hawlgalka Continued option / ijaarka la baaro!
mashaariicda Hogaamiyaha wada hadlay sidii xal in la wado hannaanka ka mid ah mashaariicda casriga ah ee meelaha tusaale ahaan. ganacsi / Mack, broadband ballaarinta / taleefoonka, filanka (m.h.a. Heico Basten). Si kooban u kordhinaya degaanka 30 % kharashka iyo aad u hesho inta kale ee deeqaha taageerada. 30 %-kharashka qiimayn karo shaqada iskaa wax u qabso. Waxyooday Xagga mashaariic kale oo laga heli karaa landsbygdsnätverkets projektdatabas.
La soo-jeediyey suurto gal. waxbarasho ama aqoonta afku ka Alby iyo Ljustorp sida ay u ordaan kaalin shidaal / dukaan.
Funny in cusub a qoyska baradka dhaqaaqay Holm. Waa in goluhu ee Lars-Åke Sundberg. guryaha More madhan waxaa lagu dhiirigelinayaa inay isku dayaan in ay kireeyo, si xor ah u qoysaska carruurta leh. Hab wanaagsan oo “Prov-bo” oo markaas haddii loo baahdo. awoodaan si ay u iibsadaan.
Eeg guryaha iibka ah iyo kiro.
site Tilmaamo ad waayo, NEW iyo calendar waxay bilaabeen inay in la isticmaalo, rajabeeto!
tours baska wada hadlay. More hadda ka badan tagaan 2008, inkastoo dadka yar yar. Waxaa shaki tiro isku mid ah halkii baska si Kovland ka Indal Liden sida Holm. waayeelka More tago baska hadda Holm magaalada, waayo, adeeganayay in Birsta M.M.. tan iyo markii ay keliya kharash 100Karoon / bishii (!!) si ay u raacaan baska ee degmada oo dhan. Go'aanka ay suuragal tahay. turändringar noo noqonaysaan. Funnily ku filan, doonayaan in maamulka gobolka uu doonayo in uu dib gooyaa 30% basaska, halka degmada doonayo in uu laba jibaar gaadiidka dadweynaha si ay u 2020. taageero Good dhexe, halkaas waxaa jooga miyiga iyo Holm. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan safarka shaqada Holm-Sundsvall.
Comments ama ändingsförslag basaska / jeer baska mar walba soo dhawaynaynaa ku nuuxnuuxsaday fog Tommie orodka; tommie@trapatronen.se .
wargeyska Liden, kaas oo sidoo kale lagu daabacay Holm, weydiisanaya wax dheeraad ah oo xubno ka ah iyo farxad aqbali talooyin dheeraad ah oo ka yimid bogga Holm.
barafka ayaa waxaa aan u malaynay in la beddelayo sannadihii, laakiinse haatan kuwa ka mas'uulka ah codsiyada weli bilaabay bafinayo. Waxaa jiray carruurta waxaa si ay u tagaan ka hor inta barafka waa la qaboojiyey iyo hadda la qabtay sidoo kale “caweyska qalfoof” habeenkii jimcaha waayo waa weyn ama yar yar!
Waxaa dhawaan uu leeyahay script qoran iyo soundtrack in Holm ah in la sii daayo movie socda. Eebehenno ayaa laga soo qaatay deegaanka qurux badan halkan.
Jessica Falk isu abuuro soundtrack ah.
waqti Holm-kulan / taariikhda Next aan weli la go'aamiyo, hoos ka eeg.
– Tommie mar kale hubi Björn Norling haddii iyo markii uu ka iman karo kulanka soo socda ee hogaamiyaha mashruuca in ay ka hadlaan hogaamiyaha, ka dibna waxaan go'aansan waqtiga iyo taariikhda.
– Janne Vinroth jeeg si deg deg ah la Alex haddii ay macquul tahay in kiraysan saldhigga / bamka ilaa ogaysiis dambe. kulanka hore ee mustaqbalka dhow loo baahan karaa on this.
– Niklas kulan ee hore u xiiseynaya, Janne, dukaanka iyo muujiyaan xiisaha.
– Gunilla hadal ICA Kovland xiisaha Holm Hall sida laan.
– Niklas wuxuu diyaariyaa ah fikrad-box on Holmbygden.se halkaas oo aad si fudud u soo qori kartaa talooyin ku saabsan waxa loo baahan yahay in la sameeyo Holm.
Församlingshemmet 5/12 2012 VISA.Close.
Holm Vallen 21/11 2012 VISA.Close.
kulanka Previous: Maxaa ku dhacaya maanta dugsiga?
Kormeeraha Guud Hans-Olof Sandström ayaa sheegay inuu la hadlay dhammaan waalidiinta (ma - ma Patrik tusaale) iyo qof kasta oo ku faraxsanaa in ay leeyihiin carruurta Liden. arrimaha maxalliga ah ayaa sii wada hadlay.
kulanka Previous: Ma ururka degmada Österström hadhay? waxa ay noqon doontaa gym ah Österström?
No goobta xisbiga weli maanta. Billy siibta nedervåning, waxay noqon doontaa hoyga gaarka loo leeyahay, Xarumaha ka baxsan qorsheeyay - waayo Holmbor oo dhan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Holmbygden.se/foreningar/osterstroms-bygdegardsforening/.
Bagarstugan sii joogo xarunta for kirada.
kulanka Previous: Warqado ku saabsan website iyo kulanka waxaa laga dhigi doonaa riday jiidho agagaarka Holm ah. Warqado u qoray Niklas, diray inay Patrik by Anders ("Jaalle ijaaray") Go'an 500st daabacaadda dhan. flyers leeyihiin 121121 markii la qaybiyey ka Gimåfors in Anundgård. Ingela, Kent Å, Catarina iyo Kent dheeraad ah siisaa N saamiga.
kulanka Previous: Wicitaanka ee Holm! Waa in aan isku day in aad isticmaasho waxa on tuulada maanta si baahidiisa. Niklas ayaa saxiixay la Warqadaha xayeeysiinanaya ah, kaas oo lagu / loo qaybin doonaa.
kulanka Previous: waxaan hagaajin karaa geeduhu ah oo kulul at Sjöändan isgoyska leh view in Holmsjön.
Catarina / Kent ayaa helay qabsado Agency Transport ay khuseyso, ku noqon lahaa. Si kastaba ha ahaatee, ma aad arki kartaa baddii ... runtii waa in bidix xisbiga kaynta wanaagsan ee?
kulanka Previous: Waa maxay la bamka petrol. Alexander u muuqataa in ay doonayaan in ay ka takhalusaan bamka? Ma la PEMA hadlay waayo shidaal kaga. Miyaanan ka dhawaajin sida ay doonayaan si ay ula wareegaan "saldhiga gaaska". Better haddii qof / Urur doonayo in ay qaataan ka badan. Abuuritaanka ururka tuulo / iskaashi? Sahlan loo helo tabarucaadka lacagta sida. Maxay bamka maanta? xoog, kortautomat m.w.?
Janne la hubiyey Alexander sida ay hadda u shaqeeya:
Waa run in Alexander doonayo in laga takhaluso waxaa ka mid ah. Waxa uu doonayaa in uu noqdo, si kastaba ha ahaatee, iibiso qaboojiyeyaasha, komberesarrada, iwm. halka bamka. Waxaan sidoo kale ka hadlay fursado kala duwan.
Tusaalooyinka wareegay waa ka Sollerön, Dalarna. model A noo?
Bal eeg sida ay sameeyeen in ay noqoto meesha ridday uruursanayey talooyinka iyo Sörbygden?
Kent sii tashan PEMA ...
kulanka Previous: Thomas wuxuu hubinayaa in la Ljustorp sida ay u ordo ee bamka iyo dukaan ku model wadareed.
La hadlay ay hore iskula soo, ururka tuulo dukaan ku leh qalabka oo dhan (qaboojiyaha, kyl iwm). Markaas ayay kireeyo ganacsade ah oo u waddaa. Halkan Holm, xaaladda ay tahay mid yar oo kala duwan milkiilaha gaar ah ee guriga, markaas dooneynin inay iska iibiyaan qaboojiyaha o qaboojiyaha halka saldhiga gaaska.
canshuurta mushaharka Hoose ee Holm shirkadaha qaar ka mid ah p.g.a. waa in meelaha taageerada (toddoba, duulimaadyo iyo tagaasida gaadiidka). Janne ayaa badewedu hore ee Hawlaha Taxi. Niklas qoray shirkadda website-ka si ay u kicin ganacsi-abuurka ee Holm.
of kitaabkii duudduubnaa in Stugun ugu horeysay ... 4 walise, sano ka dib 125 walise. tartan noocan oo kale ah waa in ay halkan la shaqeyn karin, gaar ahaan la meelaha cusub ganaax ku wareegsan u gudubno,.
Waxaan u baahan nahay si aad u hesho news more wanaagsan in waraaqaha iyo Holm internet.
movie TV ayaa la dhigay Ulaha xagaaga. la heli karo?
700 € la safarada iyo M.M. doon. ka Poland.
ah. dabayl: Cable ayaa keentay in ay Lövåsen ka Liden. Haamaha diyaar u ah ballaarinta mustaqbalka waa. Dhisay diskuterades Peng.
EULOS ayaa la wareegay mashruuca ka Vinbolaget.. saamiyada No la iibin doono. EULOS dan ay si toos ah xiriir la leedahay tuulada oo nala siiyo byapengen si toos ah oo aan degmada sida dhex-. Hubi in aan iskaashi iyo tartami labada kooxood ee Holm.
Ma aha sida go'an badan maanta in ay sii kor keenaysaa waayo, mooto. Ha dadka ha soo fuulo oo tag snowmobiling in ilaa xad la mid ah. Waxaa wax laga xumaado.
Talooyin firaaqada! Barafka dhib hadda Lillsjön iyo Anundgård Lake.
Waa in uu dabaal Lucia ah 13:e in Church.
Julaktion guriga kaniisadda in laba toddobaad. info Xitaa badan oo ku saabsan ilaalinta shilalka in gabigiisaba ah. Xadhiga Wadnaha (operator SOS go'aansado) shil gaari, dab iyo hafashada (RTJ amarka gudaha go'aansado) macaamilaan iyada oo SMS in gabigiisaba ah. (Ljustorp, Holm, Överturingen, North Hazel iyo Magpie goobaha maxkamadda).
Heico Basten, la taliyaha deggenaanshahahoyga ee Stöde (Asal ahaan ka soo Holland), hadlay oo ku saabsan shirkadda Destis iyo fursadaha ay. Darawalka kaashanaya taageerada degmada by socalled a. Leaderprojekt. kaniisaddu waa mashruuca oo. 2 qoysaska u guurtay, 3 TOD. wuxuu ku saabsan yahay, 1 in our. VarVar Muhaajiriinta BL. a. via EU:bandhiga ugu weyn socdaalka ee Holland, site, xirfadaha communities.IT loo baahan yahay in Sundsvall. Dad badan oo doonaya in ay ka shaqeeyaan magaalada, laakiin joogo baadiyaha. Masaafada magaalada dhibaato ah ma in ay dhacdo. Ma aha sida dad badan u maamulaan si ay guriga haatan iibin ee Holland, laakiinse qaar badan baa u baahan tahay shaqo. jiidashada waa iskaashi dabiiciga ah iyo livskvalitét.Ett la Heico iyo shirkadda Destis faa'iideysan lahaa Holm. Maalgelinta ayaa loo baahan yahay, si kastaba ha ahaatee,. Mashruuca Hogaamiyaha A la bilaabi karaa. Waxay u baahan tahay go'an tahay in ay u dhawrtaan. Björn Norling, Mittland, dheeraad ah oo kuu sheegi kara oo og sida ay u shaqayso.
Hubi mid ka mid ah urur kasta doono ay shirka soo socda.
HBU F / T - Holm horumarinta degmada ee Företagand iyo Dalxiiska - Erica Forström (Janne xiriir)
Holm ayaa Sports Club - yuusan Eliasson (Thomas xiriir)
Holm ayaa Local History Society - (Thomas xiriir)
Draka kooxda barafka Buurta - Baaskiilka iyo barafka - Jan-Erik Nilsson (Kent)
Holm PRO - Staffan Andersson
ururka Vike-macaash - Holger Sahlin (Max)
Österströms Bygdegårdsförening - Carina Hultman (IMAN?)
Golaha Kaniisadaha - Ulla Grelson (IMAN?).
Taariikhda Next 5:December at 19:00, Församlingshemmet. Gunilla arko haddii aan ka amaahan kartaa dugsiga, haddii kale Församlingshemmet. Gunilla arko haddii aan noqon kartaa in dugsiga, haddii kale Församlingshemmet. Niklas oo ku dhawaaqay shirka xiga website-ka iyo via e-mail.
Holm Vallen, 18/10 2012 VISA.Close.
Dugsiga ayaa maanta? Intaa waxaa dheer, ee p.g.a hadda nasinta. macalin oo la la'yahay. Hadda, la'aanta ah ee ku salaysan ilmaha si kastaba ha ahaatee, ka dhigaysa in ay muran skolort waa ugu fiican waqtigan. Waxa aynu ognahay waa in aanu u baahan tahay carruur badan (!) si ay u sii socodsiinta dugsiga iyo tayada.
Waa in aan isku day heli "our wax" ee Holm. Waxaa laga yaabaa in hal meel cidhiidhi ah oo nagu muuqaal, iyo sidoo kale tus. Näsåker ayaa Urkult iid iyo saaray ay degmada on map-ka.
Waa in aan si fiican ugu ay lid ugu goolasha badan ee tuulada, waxay abuurtaa wadajirka ee Holm.
waxaan kuu diyaarin karnaa a byafest sanadlaha iyada oo diiradda la yara cidhiidhi ah. T.ex. in countryfestival.
heshiis qaboobaha ah u noqon karaa wax? Hel taariikhda mashquul, xilliga sanadka, Si ka duwan xagaaga. Fikradaha waxaa.
Holm Cup sidii lagu jiido dad yar - ciyaartoyda ugu. Better la Lilla Holm Cup, waalidiin badan. Si kastaba ha ahaatee, aad u tartan rasmi ah la koob kale. tartamada Boules qabtay inta lagu jiro xagaaga si fiican u leh kooxda martida ah iyo isticmaalka bar fudud u shaqeeyo.
Ma ururka degmada Österströms hadhay? waxa ay noqon doontaa gym ah Österström? Hubisay baxay shirka xiga.
Qaar ka mid ah weli ma oga hadii Holmbygden.se. Warqado waa in la sameeyaa oo ku rid jiidho agagaarka Holm ah. Flyer in la sameeyo si ay u abaabulaan Holmbygden.se iyo shirka xiga. kuwaas oo la dhigay in jiidho.
Inta badan ay u guureen tuuboyinka Deep xiisa. Sidee? Dadka waa in la soo jiidatay degmada Holm guud ayaa sidoo kale.
Wicitaanka ee Holm! Waa in aan isku day in aad isticmaasho waxa on tuulada maanta si baahidiisa, t.ex. nijaar, layers rooga, rinjiile, Österströms Estate. Ganacsi on Holmbygden.se/foretag ah. More waa lagu soo dhaweynayaa in aad ku darto in ay meesha free! skrivaa doonaa on flyers.
Ulaha lagu soo kiraystay oo tuulada oo ay halkan ku riyaaqay. hadda dhaqaaqi doono dib u Poland, laakiin ma daneeyaan inay sii joogaan Holm. cusub A haatan lasoo wareegi doonto waxaa. Waxaa loo baahan yahay si ay u fududaato in la kiraysto ee Holm. Waxaa soo jiidata dadka si marxaladda ka dib noqdaan kuwo dadka deegaanka joogto ah.
Waxaa had iyo jeer waa saf oo had iyo jeer waxaa jira xiiso ay u guuraan si "The dhismaha cusub". Waxaa loo baahan yahay guryaha la kireysto. Too xun ee "guriga Senior" iyo "Housing MACALINKA" wax laga beddelo.
aan awoodno hagaajin ku nastaan ​​xun ee Holmsjö Butt isgoyska la aragtida ah in Holmsjön - "Gateway si Holm". La hadal waaxda gaadiidka haddii ay caadi tahay in ay ballaariso laysaan, halkaas oo hore u farabadan oo aad u heli. waxaad ka heli kartaa kaalin muhiim ah in this by dowladda gobolka. Arkaysid Traffic Authority ee fursadaha shirka xiga.
Wax la taaban karo ayaa hareeraha Affär'n for sale. Daneeyayaasha yihiin, si kastaba ha ahaatee,, laakiin waxba yimid of shot a.
Xaaladda bamka shidaalka laga wada hadlay. Alexander ayaa doonaya inuu u dhawrtaan, ama u baahan tahay qof kale is ogow waxa of? Kollas up for kulanka soo socda.
Waa in aan la hadlo Ljustorp ku saabsan sida ay u ordaan oo ay bamka iyo dukaan ku model wadareed. Arkaysid xiriirada in Ljustorp kulan Contact.
# ShepherdsHut ee dokumentsamling (waayo, agaasimayaasha)
Read waraaqaha iyo daqiiqo oo kulan (furmo suuqa kala cusub).
1. Gal si aad Google Drive la Account aad Google.
2. Markaas riix “La ila wadaagay” bidixda si aad u hesho folder HBU ee.
aan ka gali kartaa! La'yahay Account Google!
Waxaa aad email Gmail aad si toos ah u leedahay xisaabta Google a. Haddii aadan u leeyihiin, sameeyo account Google ah halkan, qaadataa 2min kaliya!
ka dibna riix “Waxaan jeclahay in aad isticmaasho cinwaanka email aan hadda”, waxaad isticmaali kartaa cinwaanka email aad hadda sida Account Google oo aan la abuurayo a cinwaankaaga cusub Gmail.
i kuwan raadkaygay Ski Anundgård / Vike
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ski halkan raad.
3/3: Dhismaha vindkr ...
2/3: Österströms labada cirif ...
28/2: SVT Report on sameeyo ...
news Previous in widget NEWS ah Select Month March 2019 (5) February 2019 (3) January 2019 (1) December 2018 (1) October 2018 (1) September 2018 (4) August 2018 (1) July 2018 (5) June 2018 (6) Laga yaabaa 2018 (6) April 2018 (2) March 2018 (2) December 2017 (2) July 2017 (2) June 2017 (1) Laga yaabaa 2017 (4) April 2017 (2) March 2017 (4) February 2017 (4) January 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (1) September 2016 (4) June 2016 (5) Laga yaabaa 2016 (5) April 2016 (3) March 2016 (6) February 2016 (4) January 2016 (2) December 2015 (3) November 2015 (4) October 2015 (1) September 2015 (5) August 2015 (4) July 2015 (4) June 2015 (3) Laga yaabaa 2015 (7) April 2015 (4) March 2015 (4) February 2015 (4) January 2015 (8) December 2014 (3) November 2014 (4) October 2014 (5) September 2014 (3) August 2014 (4) July 2014 (2) June 2014 (6) Laga yaabaa 2014 (5) April 2014 (8) March 2014 (11) February 2014 (4) January 2014 (7) December 2013 (12) November 2013 (12) October 2013 (10) September 2013 (9) August 2013 (15) July 2013 (13) June 2013 (18) Laga yaabaa 2013 (17) April 2013 (13) March 2013 (11) February 2013 (7) January 2013 (13) December 2012 (9) November 2012 (9) October 2012 (6) September 2012 (10) August 2012 (10) July 2012 (4) June 2012 (11) Laga yaabaa 2012 (10) April 2012 (4) March 2012 (7) February 2012 (6) January 2012 (3) December 2011 (3)
22/3: Sundsvall (manka)
11/2: Loss of D ugu horeysay ...